म्हेन्दोमायामा राज किङको ‘राज | Jambulingfilms.com
म्हेन्दोमायामा राज किङको ‘राज
राज किङ वाइबा अर्थात राज गर्ने ‘राजा’ । तर, मुलुकमा राज गर्ने राजा छैन । यता रसुवा, धादिङ, नुवाकोट क्षेत्रको कलाकारीता क्षेत्रमा भने राज किङको ‘राज’ चल्छ ।
उनी यस क्षेत्रका रोलमोडल हुन् । उनले निर्देशनसँगै प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका चलचित्र‘प्रङना’ (गरिब) अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा मौलिक पहिचानसहित छाँयाकन गरीएको प्रङना अहिले प्रत्येक तामाङ गाउँ गाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ । दर्शकले यो चलचित्रलाई मौलिक तामाङ चलचित्रको संज्ञा दिएका छन्। यहाँको मौलिक भाषा, कला, संस्कृतिले प्रङनालाई जीवन्त बनाएको छ ।
राज किङ वाइबा , धादिङ हाल खनियाबास गाउँपालिकामा – ५ साबिक ( सत्यदेवी गा. वि. स. -७ ) २०४५ असोज १५ मा जन्मिएका हुन । उनको बुबा वीर बहादुर तामाङ र आमा राम माया तामाङ हुन् । ९ वर्ष हुँदा बुवाको निधन भएपछि राज किङ काठमाडौंमा मामा माइज्यूकोमा अध्यनका लागि आएका थिए ।
‘जीवनमा कहिलै सेकेन्ड हुन जानिन । मेरो विशेषता भनेको प्रथम हुने हो,’उनले भने,‘कक्षा १० सम्म प्रथम नै भए । शान्ति विद्या माविबाटै एस.एल.सि.मा प्रथम श्रेणिमा पास गरेको हुँ ।’
विद्यालय पढ्दा पढ्दै बालाजुमा नृत्य सिकेको सुनाउँछन, उनी । एस.एल.सि. सक्दा नृत्य सिकाउन सक्ने प्रशिक्षक भइसकेका थिए । एस.एल.सि.पछि अमृत साइन्स क्याम्पसमा आई.ए.सि. पढ्न थालेका राजलाई कलाकारिताको मोहले खुबै तानेको अनुभव सुनाउँछन् । यसपछि उनले साउथ वेष्टर्न कलेजबाट ब्याच्लर अध्ययन गरेका रहेछन ।
उनको प्रावि तहको अध्ययन भने गाउँकै सत्यदेवि प्रा.वि.मा भएको हो । उनले निकै बेर सोचेर भने,‘०५४ साल तीर हुनु पर्छ । तीन कक्षामा हुँदा नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएको थिए । यही उर्जाले यहाँसम्म आइ पुगेको छु ।
उनी उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै विभिन्न कलाकेन्द्रमा नृत्य सिकाउथ्ये । यहि क्रममा जम्बुलिङ फिल्म्स प्रालि ०६७ मा सञ्चालनमा ल्याए । । आफूले सिकेको र जानेका कलालाई संस्थागत रुपमा चिनाउन जम्बुलिङ फिल्म्स प्रालि ल्याएको सुनाउँछन् । उनको कला यात्रामा सागर एस वाईवाको पनि टेको रहेको विर्सन चाहँदैन्न।
उनलाई फिल्डमा भने ‘चच्चाराङी ’ म्युजिक भिडियोले चिनाएका हुन् । पहिलो म्युजिक भिडियोकै कारण उनी अहिलेसम्म राजकिङ भएको सुनाउँछन् । यो गीतको म्युजिक अहिले पनि हिट छ । धादिङ, नुवाकोट रसुवा क्षेत्रको सैकल कोरोरो, तोर्क्यङ पिस्कुले पछीको यो पहिलो प्रोफेशनल्ली म्युजिक भिडियो रहेको उनको दावि छ । ‘साँच्चिकै व्यवसायीक रुपमा मैले यस क्षेत्रको म्युजिक भिडियो सुरु गरेको भन्दा फरक पर्दैन’ उनले भने ।
उनले सूरुवातमा ‘रक्कि’ नेपाली कथानक चलचित्रमा अभिनय गरिसकेको थिए । यो उनको पहिलो क्यामार फेस थियो ।
उनी अहिले कोरियोग्राफि, अभिनयसँगै निर्देशन् मा माहिर छन । समय मिलाउन पनि समय नै हेर्नु पर्छ । सुरुवात नै कोरियोग्राफि, मोडलिङ र निर्देशन भएका कारण अहिलेसम्म दुवै काम एकैचोटि गर्दा कुनै अफ्ठेरो महशुस नभएको उनको भनाई छ ।
राम्रो कथा र पात्रमा आफैले भूमिका निर्वाह गर्दा आफूले चाहे जस्तो क्लिप गर्न सकिने उनको विश्वास छ । सुरुवातदेखि नै तीन विद्यामा काम गरेकाले सहज छ भन्दा फरक नपर्ने उनको ठम्याई छ ।
बुबा सानैमा बित्तेका कारण उनलाई आमाको मायाले निकै सताउँदो रहेछ । आमाको विषयमा उनी निकै गम्भिर हुन्छन् ।
यही बीचमा उनलाई साँच्चिकै राज किङ हो भन्दा दिल खोलेर हाँस्छन । डान्स सिक्ने क्रममा उनलाई एक जना साथिले राज नाम जुराएका रहेछन् । फेरी अर्को साथिले किङ वाइबा मात्रै राखेको रहेछ । दुवै नामलाई जोडेर राज किङ वाइबा नामकरण गरेको सुनाउँछन। उनी यसकारण राज किङ वाइबा भए । अहिले धादिङ क्षेत्रको भने साँच्चिकै राज,किङ नै हुन् । उनको वास्तविक नाम भने सुक बहादुर तामाङ हो ।
‘मैले कति म्युजिक भिडियो निर्देशन गरे, कति कोरियाग्राफि भन्ने आंकलन नै गर्न सकिन्न । किनकी मैले कहिलै लेखा जोखा नै गरिन ।(हाँसोसँगै सुनाए) । उनि थप्छन‘ यो मेरो घमण्ड होइन । किनकी मैले कहिलै लेखेर राखिन ।’
नुवाकोट धादिङ र रसुवा क्षेत्रमा रहेका म्हेन्दोमाया कलाको लागि उनी साँच्चिकै राजकिङ नै रहेको समकक्षिहरुको दावि छ । यी तीन जिल्लाका तामाङहरुको भाषा, संस्कृति, भेषभुसा र कलामा विशिष्ट रहेको छ ।
यस क्षेत्रमा चर्चा पाएका गीतहरु चच्चाराङी , तोर्क्यङ पिस्कुले, साँचो ताबे बाक्सरी, तामर म्हेन्दो तर, हजार पचास्ला, तमाङ ठिटी, माने गङ्गी पखरी, म्हार्की न्हली लगाएतका गीतहरु चर्चामा रहेका छन् । उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा निर्देशनसँगै अभिनय गरेका छन् उनले । यसकारण उनी सदाबहादर कलाकार हुन् ।
उनले लाप्साङकार्पाे चलचित्रबाट प्रमुख भुमिकामा चलचित्रमा पनि अभिनय गरेका थिए । ‘टङजिम बोर्जि’ उनका लागि पहिलो चलचित्र निर्देशन रहेको थियो । यस्तै, सिङला मानेमा अतिथि कलाकारको भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
उनको पछिल्लो प्रङना चलचित्रमा निर्देशन र प्रमुख अभिनय रहेको छ । उनको अहिले प्रङना चलचित्रलाई गाउँ गाउँमा प्रदर्शन गर्ने क्रम चलिरहेको छ । साथै केही समयपछि कतार, साउदि,कुवेत, दुबईमा प्रदर्शनका लागि तयारी भइरहेको छ ।
चलचित्रबाट भाषा, कला, सस्कृतिको संरक्षण र अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनको बुझाई छ । कलाकारकै कारण तामाङ जातिको स्यामो, फेटा जीवित रहेको सुनाउँछन् ।
मूल धारका चलचित्रले नसमेटिएका संस्कृति हाम्रो अभिनय,चलचित्र र म्युजिक भिडियोले जस्ताको तस्तै उत्तारेको छ ।
उनको अफिशमा सम्मान र कदर पत्रको चाङ थियो । उनले विभिन्न राष्ट्रिय सम्मानहरु समेत पाएका छन् । उनले बिभिन्न बिधामा म्हेन्दोमाया म्युजिकअवार्ड, सुन्दरादेवी बेस्ट मोडेल म्युजिकअवार्ड, बेस्ट मोडेल बक्स अफिस म्युजिक भिडियो एवार्ड (थैल्यान्ड) , बेस्ट अक्टर-ग्लोबल मोसन पिक्चरअवार्ड (दुबइ) ,बेस्ट म्युजिक भिडियो डिरेक्टर हिमालयन इन्टर्नेश्नल म्युजिकअवार्ड र हालै सम्पन्न नाट्यश्वर पोपुलर मोडेल म्युजिकअवार्ड पनि पाएका थिए ।
तामाङ कला क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकारलाई साघुरो घेरामा राख्नु गलत बुझाई र तर्क रहेको उनको टिप्पणी छ । सानो लगानिमा पनि राम्रा फिल्म बनाउन सकिन्छ । कहिले काँहि गोला बनाउन खोज्दा चेप्टो बन्न सक्छ । यसबाट लगानि कर्ता डुब्न सक्छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय कन्सेप्टमा तामाङ चलचित्र बनाउनु पर्छ ।
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटना: कम्तीमा १७ यात्रुको मृत्यु, कैयौँ घाइते